【ကုမ္ပဏီအလုပ်အင်တာဗျူး】YUME TECHNOLOGY CO.,LTD. နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း | Working Friends
【ကုမ္ပဏီအလုပ်အင်တာဗျူး】YUME TECHNOLOGY CO.,LTD. နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း
2018年7月12日 2018年8月29日 EM
Machine , IT , Electric electronic , Chemical ပိုင်း ကျွမ်းကျင် အင်ဂျင်နီယာများအတွက်
YUME TECHNOLOGY CO.,LTD.မှ
တာဝန်ရှိသူ Ms. Otake နှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခွင့် ရရှိခဲ့ပါတယ်။
လုပ်ငန်းနယ်ပယ်နှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေးများကို အခုလိုပြောပြပေးခဲ့ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်မတို့ YUME Technology ကတော့ အင်ဂျင်နီယာဝန်ထမ်း outsourcing လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ပါတယ်။ အင်ဂျင်နီယာ နယ်ပယ်ကတော့ Machine field, IT Soft field, Electric electronic field, Chemical field ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်ဝင်ပြီးနောက် ဂျပန်စာ Training ပြီးမြောက်ပါက customer site ဆီမှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ရပါတယ်။
နိုင်ငံခြားသားအင်ဂျင်နီယာများအတွက် ဘယ်လို လေ့ကျင့်မှုတွေပေးပါသလဲ။
အလုပ်စဝင်ပြီဆိုရင် ဂျပန်စာ training အများဆုံး ၃လ ထားရှိပေးပါတယ်။
Trainingကာလအတွင်းမှာ တခြားနိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းများနှင့်အတူ အဆောင်မှာ နေထိုင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ လေ့ကျင့်ချိန်ပြီးမြောက်လို့ customer site သတ်မှတ်ပြီးတဲ့အခါ အလုပ်နေရာအနီးသို့ ပြောင်းရွှေ့စေပါတယ်။
YUME TECHNOLOGY : CareerLink ⇒ http://career.yume-tec.co.jp/en/
ဘယ်လိုဝန်ထမ်းမျိုး ခန့်အပ်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါသလဲ။
ဂျပန်မှာ အင်ဂျင်နီယာအဖြစ် နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာရနိုင်သူ လျှောက်လို့ရပါတယ်။
အင်ဂျင်နီယာဗီဇာ ဖြင့် လုပ်ကိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်
●အင်ဂျင်နီယာဗီဇာရနိုင်သည့် အင်ဂျင်နီယာပိုင်းဆိုင်ရာ လက်မှတ်၊လိုင်စင်ရှိထားသူ
နောက်ပြီး၊ နည်းပညာကို နှစ်သက်စိတ်ဝင်စားသူ၊ ပိုမိုတိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်လိုစိတ်ရှိသူ ခန့်အပ်လိုပါတယ်။နေ့စဉ်နှင့်အမျှ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေတဲ့ နည်းပညာအသစ်တွေကို လေ့လာသင်ယူပြီး၊ နားမလည်တဲ့အပိုင်းကို သေချာ ရှာဖွေလေ့လာနိုင်သူမျိုးကို ကြိုဆိုပါတယ်။ တွေ့ဆုံချင်ပါတယ်။
ဂျပန်စာအရည်အချင်းကတော့ လူတွေ့အင်တာဗျူးမှအစ ဂျပန်လို ဖြစ်တဲ့အတွက် ဂျပန်စာနှင့် ပြောဆိုဆက်ဆံနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိရင် အဆင်ပြေပါတယ်။များသောအားဖြင့် N3~ကနေလျှောက်ထားကြတာ များပါတယ်။
လက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိသော မြန်မာဝန်ထမ်းဦးရေကတော့ နည်းပေမယ့်၊ နိုင်ငံခြားသားဝန်ထမ်းပေါင်း ၁၀၀ကျော်ခန့် လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။
နှစ်စဉ် ဝန်ထမ်းစုစုပေါင်း ၁၂၀၀ခန့် ခန့်အပ်သွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားပြီး၊ နိုင်ငံလူမျိုးမခွဲခြားဘဲ သေချာ ခန့်အပ်သွားချင်ပါတယ်။
လက်ရှိ Customer site မှာ အလုပ်ဝင်နေတဲ့ မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဆိုလျှင် Technological University( မြန်မာ)မှ ​အောင်မြင်ထားပြီး၊ စက်ပစ္စည်း ၊အင်ဂျင်၊ဒီဇိုင်းစသည်တို့ကို လေ့လာခဲ့သူပါ။ လက်ရှိမှာ mechanic design ကို တာဝန်ယူ လုပ်ကိုင်နေတာ ၃နှစ်နီးပါးရှိပါပြီ။
ဂျပန်စာtraining ပြီးနောက် client ဆီစသွားတုန်းကတော့ ဒီဇိုင်းအကူအဖြစ် စတင်လုပ်ကိုင်ပါတယ်။ ဂျပန်လုပ်ငန်းခွင်မှာက အရည်အသွေးကောင်းတာကြောင့် ထုတ်လုပ်ရေးပိုင်းမှာလည်း တိတိကျကျပြုလုပ်ရကြောင်း၊အစပိုင်းမှာ အခက်အခဲတွေရှိကြောင်း ကြားသိရပါတယ်။ အခုဆိုရင် တစ်ယောက်တည်း စက်ဒီဇိုင်းပိုင်းတာဝန်ယူနိုင်သည်အထိ တိုးတက်လာပါတယ်။
ပထမဦးဆုံး client အလုပ်နေရာ သတ်မှတ်ရန်အတွက် တာဝန်ခံနှင့်အတူ Client ကုမ္ပဏီထံ သွားရောက်တွေ့ဆုံပါတယ်။
သွားတွေ့တဲ့အခါ အင်တာဗျူး ပြုလုပ်ပြီး၊ မိမိရဲ့စွမ်းရည်၊အတွေ့အကြုံ ၊ ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်း စသည်တို့ကို ပြောပြရပါတယ်။ တစ်ဖန် client ဘက်မှ လုပ်ဆောင်ရမယ့် လုပ်ငန်းအကြောင်း ရှင်းလင်းပြောပြပြီး ၊နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အဆင်ပြေရင် ထိုclient သွားလုပ်ဖို့ စီစဉ်သတ်မှတ်ပေးပါတယ်။
Client ဆီသွားလုပ်နေစဉ်ကာလအတွင်းမှာလည်း ကြီးကြပ်တာဝန်ခံထားထားပေးတဲ့အတွက် မသိနားမလည်ရှိရင်လည်း သေချာဆွေးနွေးတိုင်ပင်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခုခု ပူပင်နေခြင်း၊နေထိုင်ရေး အဆင်မပြေခြင်း စသည်တို့ကိုလည်း ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါတယ်။
အလုပ်မဝင်ခင် ဗီဇာကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်ပေးပြီး၊ဂျပန်မှာနေထိုင်ဖို့ အိမ်ကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာဒေသအလိုက် အခန်းခ၊ ပြောင်းရွှေ့ခစသဖြင့် သတ်မှတ်နှုန်းထားအတိုင်း ကုမ္ပဏီမှ ထောက်ပံ့ပါတယ်။
မြန်မာ(ဂျပန်နိုင်ငံပြင်ပ) ကနေ တိုက်ရိုက်လျှောက်ထားပြီးလာသူ အတွက်ကတော့ ဂျပန်ရောက်ပြီး ရုံးအထိ လမ်းစရိတ် ထောက့်ပံ့ပေးပါတယ်။
ဂျပန်မှာ အလုပ်လုပ်ကိုင်ချင်သူ၊ ဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုနှင့် နည်းပညာစိတ်ဝင်စားသူများ ကျွန်မတို့ YUME TECHNOLOGYမှာ အိပ်မက်အကောင်ထည်ဖော်ကြရအောင်။
စိတ်ဝင်စားရင် ဆက်သွယ်ပေးပါနော်။ အဝေးမှာ နေထိုင်သူအတွက် Skype Interview လည်း ပြုလုပ်ပါတယ်။
Shin Osaki Kangyou Building 4F, 1-6-4 Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo
Representative & CEO Saichirou Motoyama
1,267 million yen （as of September 30, 2017）
Engineer Outsourcing etc
YUME TECHNOLOGY : Careerhttp://career.yume-tec.co.jp/en/
Previous Previous post: အာရုံစူးစိုက်မှုအချိန်နှင့် ဂျပန်
Next Next post: 【ကုမ္ပဏီအလုပ်အင်တာဗျူး】YUME TECHNOLOGY CO.,LTD.မှ မြန်မာဝန်ထမ်း : Mechanical Engineer